Ihe kacha mma nkuzi na HIIT maka mgbanwe gị - Ụzọ Makia
Nnukwu ọzụzụ dị na ụlọ maka agagharị na mgbanwe
Ọzụzụ dị mkpa dị ezigbo mkpa. Ka oge na-aga, ihe ọmụma gbasara abamuru nke ọzụzụ na-agagharị amụba na-arịwanye elu. Ọdịdị dị mma na-echebe gị pụọ na mmerụ ma mee ka ahụike gị na ume gị dịkwuo mma.
Gini ka omuma ndi ozo? Ònye Pụrụ Irite Uru na Ya?
Ụzọ Makia bụ maka njem na ịdị mfe. Ime mgbanwe bu uzo di omuma nke ihe jikotara. Ntugharị pụtara nchịkwa na njikwa nke usoro niile nke njikọ. E nwere ndị mmadụ na-agbanwe agbanwe, ma ha nwere ike isi na-esiri ha ike ime ka mmiri dị ọcha dị nnọọ arọ. Ịgbanwe ihe ma nwee njem dị mma bụ ihe abụọ dị iche iche.
Ọganihu Ọzụzụ Mkpụrụ ọ bụla
Ọzụzụ ndị njem nwere ike inyere onye ọ bụla aka n'ụzọ nkịtị. Nke a pụtara na ọ bara uru ka ị na-eme ọzụzụ na-adabere na ihe mgbaru ọsọ gị. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ịchọrọ ịghọ onye na-agba akwụkwọ na ụwa, ọ baghị uru ime ihe dị ukwuu. Mgbatị ogologo oge ma buru ibu nwere mmetụta nke ibelata ahụ ike. Mana dịka akụkụ nke usoro Makia, inwe ike ime nkedo ga-enyere gị aka inweta ụfọdụ mmeghari ike.
Ịgba Ọganihu na Ịkpa Isometric
N'ezie, a na-atụ aro onye na-agbagharị ume iji mee ka ọ ghara ịmalite ịgbatị ya na itinye uche na ịchekwa ahụ ya "meghee" site na ịgbatị aka ya. Ịgbatị eriri elu, ịmịpụ nke isometric, na njikọta nke ndị a bụ ụzọ kachasị dị irè iji kwalite ikike nke ahụ ịrụ ọrụ. Ọ bụghị mgbe nile ka ha na-eme ka uru ahụ dịkwuo ogologo, ma kama ọ na-agbanwekarị usoro iwu, mmeghachi omume, na usoro mgbochi.
Ịgbatị eriri elu bụ nkedo a na-achịkwa na-emegharị, e. g. , nke a na-elekwasị anya nke ọma n'ụzọ dị nro nke dị arọ n'ahụ onye ahụ. Ịdọ aka ná ntị nke isometric na-esite na arụ ọrụ ahụ, e. g. , mgbe ị na-eguzo na njedebe na-agbatị aka. Usoro nchikota ndia gunyere usoro obi iru ala na obi iru ala-ezumike + na ijide onwe ya.
Mkpịsị aka na-agafe bụ nke na-agbakwụnye ụbụrụ n'ogologo oge. Otú ọ dị, ahịrị kwesịrị ịbụ "ezigbo oghe" maka ịgbatị mgbatị ka ọ dị irè. A na-edebe 'mgbochi' meghee 'ọbụna mgbe ị na-eme ọzụzụ ọzụzụ kpụ ọkụ n'ọnụ site na ịmegharị mmegharị ahụ.
Ntanarị aka na-eme ka mmadụ nwee ahụ iru ala mgbe ọ nọ n'ọnọdụ aka, e. g. , na-eguzo ma na-ehulata n'ihu. N'ezie, ị ga-etinye aka na ọzụzụ mgbe ị na-ezube ka ị nwee ike ịmalite njem.
Ihe ize ndụ gụnyere karịsịa ogologo oge (30+ sec) ịgbatị bụ na nchebe nchebe nke mọzụlụ na-ebelata nke ukwuu ma nke a na - eme ka njedebe nke ịchịkwa ihe dịgasị iche iche, karịsịa na isi ihe dị iche iche nke ije ahụ. Mgbe nke a mere, ihe ize ndụ nke mmerụ ahụ na-arịwanye elu ma mgbe ịbịarịrị na n'omume niile ebe njem ahụ na-aga ma ọ bụ na-aga, na nso ihe kachasị. N'ihi nke a, a ghaghị ijikọta ihe ndị na-agafe agafe na mmemme maka ịmepụta mmegharị. Ụkpụrụ a bụ nnukwu ọrụ na Method Makia ebe ọ dị mkpa maka ma usoro dịgasị iche iche na njikwa dị mma.
Ngwá Agha Ike nke Na - agụnye Nzukọ Na - ejikọta Ọnụ
N 'oge ụfọdụ, mmepe nke agagharị nwere ike ịmalite inyere aka n'ụzọ zuru ezu na-eme ka ịzụ ọzụzụ dị ike. Dịka ọmụmaatụ, akwara infraspinatus nke n'ubu ya na-enwekarị ike na ọnọdụ ije ụkwụ nwere ike ịdọrọ. Mgbe nke a bụ ikpe, mgbe ụzụ ndị a bịarutere nso na-eme ka ha ghọta na ọnọdụ a na-enweghị ike ijide onwe ya na-eru nso ma ha '.
Malite nke ọma
Ikwesiri ịmalite imegharị ahụ, ọ bụ naanị n'ihi ịkwalite! Mgbe ụfọdụ ndị na-anụ okwu ahụ bụ "ịgbatị", ha na-ejikọta ya na mgbu na iwe.
Otú ọ dị, mmegharị ahụ ekwesịghị ime ka ihe mgbu, ma ha abụghị ihe ọjọọ. Ọ bụrụ na ị ga-amanye onwe gị ime ihe, ahụ gị na-enweta ozi nke ihe ize ndụ na-eru nso, ihe ga-esi na ya pụta adịghị mma. Mgbe ị na-agbatị mgbatị, ị ga-anwa ilekwasị anya n'ịchọta ọnọdụ ntụrụndụ, mgbe ị na-ejikwa njide onwe gị na-eme ihe dị mkpa.
Ọdịdị Ntugharị Ọmụmụ
Ụzọ Makia-ọzụzụ na-agụnye ọzụzụ dịgasị iche iche. N'ọtụtụ ụzọ, ike na-emepee onwe ha site n'aka onwe ha, ma nke a nwere ike ime ka ọ dịkwuo mma site na mmega ahụ dị iche iche Source .